कमल थापाको पराजयले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग, उनको पराजयका ५ कारणहरु : – Sadhaiko Khabar
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १९, २०७८ समय: १४:१३:२४
काठमाडौं / राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कमल थापाको पराजयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ । नयाँ पुस्ताका राजेन्द्र लिङ्देनसँग अनुभवी नेता थापा पराजित भएका हुन् ।
१. क’मजोर राजनीतिक भूगोल :-
कमल थापा राष्ट्रिय राजनीतिमा ब’लियो रुपमा देखापरेपनि निर्वाचन क्षेत्रमा कम’जोर देखिदै आएका छन् । मकवानपुरलाई राजनीतिक भूगोल बनाउँदै आएका उनी बहुदल आएपछि एकपटक मात्र २०५१ सालमा त्यहाँबाट निर्वाचित भएका थिए ।
२०६५ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा उनी समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बने । त्यसपछि भएका दुईवटै निर्वाचनमा थापा पराजित भए । मूलधारको राजनीतिक दलको अध्यक्ष भइकन उनी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पटक पटक प’राजित हुनुले कार्यकर्ताले क’मजोर ठान्न थाले ।
जबकि राप्रपा देशभर हा’र्दा राजेन्द्र लिङ्देनले झापाबाट चुनाव जिते । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला समेत रहेको झापामा नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गर्न सक्नुले लिङ्देन भूगोलमा ब’लियो देखिए । राप्रपा स्थानीय चुनावमा देशभर नगरपालिका तहमा हार्दा धबल शमशेर राणाले जिते । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर जितेका राणाको पनि भूगोल बलियो देखियो ।
राप्रपाका कार्यकर्ताले भूगोल बलियो भएको नेताको चाहना राखे । लिङ्देन र राणा दुवै लोकप्रीय बने । अर्कोतर्फ, गत वर्ष राजाको पक्षमा हजारौं मानिस सडकमा आउँदा झापामा लिङ्देनले श’क्ति प्र’दर्शन गरेर देखाए । धबल शमशेरले पनि नेपालगञ्जमा त्यस्तै शक्ति देखाए । जसका कारण राप्रपा समर्थक दुवैप्रति आश्वस्त भए ।
लिङ्देन र धबल शमशेर राणालाई चुनाव ह’राउने प्रयासहरु भएका थिए । तर, सफल भएनन् । कमल थापालाई धबल शमशेरले नेपालगञ्जमा चुनाव प्रचारमा आउनबाट रोके । उनले भित्रन पनि दिएनन् । राप्रपामा राजनीतिक भूगोल बलियो भएका सुर्यबहादुर थापा थिए । उनलाई दरबार लागेर हराउन खोज्दा पनि धनकुटाबाट सक्दैनथियो । लिङ्देन र राणाको स्थिति त्यस्तै बन्यो । जुन राप्रपा समर्थकले खोजेका थिए ।
२. अस्पष्ट योजना :-
कमल थापा पछिल्लो समय अस्प’ष्ट देखिन थालेका थिए । उनले आफूलाई सुर्यबहादुर थापाको उत्तराधिकारीका रुपमा प्रस्तुत गर्न त खोज्थे तर सकेनन् । हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा उठाए तर त्यसमाथि आशंका पैदा हुने गतिविधि गरे । २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा हस्ताक्षर गरे । जसले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाका पक्षधरलाई चि’ढ्यायो ।
राप्रपाले उठाएको मूल मुद्दाविपरितको संविधान अन्र्तगतको सरकारमा कमल थापा उपप्रधानमन्त्री पाएर गए । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा क्रमशः स्थानीय चुनाव र प्रतिनिधि सभा चुनाव सफल पार्न भन्दै गए ।
त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा यसबाट उनी मु’द्दा भन्दा सत्ताका भोका हुन् भन्ने सन्देश गयो । उनले मु’द्दा बि’र्सिएको सन्देश जाँदा २०७४ सालको निर्वाचनमा नरा’म्रो ध’क्का खानुपरेको थियो । लिङ्देनबाहेक सबै नेताहरु चुनाव हारे । यसमा थापाको अस्प’ष्ट योजना र क’मजोर रणनीति नै रहेको आ’रोप लाग्यो ।
३. सैद्धान्तिक रुपमा विचलन :-
कमल थापाले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था बोलिरहे । तर, उनले यही मु’द्दालाई सत्तामा पुग्ने र श’क्तिको अभ्यास गरिरहने कार्यशैली देखाएको सन्देश प्रवाह भयो ।
कमल थापालाई कतिपयले गणतन्त्रमा एउटा खुट्टा र राजसंस्थामा अर्को खुट्टा राखेको सम्म भने । उनको हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाप्रतिको प्रतिवद्धतामा आशं’काहरु उत्पन्न हुने गतिविधिहरु भए । उनमा सुर्यबहादुर थापाको जस्तो जनताको चाहना अनुसारको लाइन समात्ने लोकेन्द्रबहादुर चन्दमा जस्तो एउटै लाइन नछाड्ने शैली पनि देखिएन ।
वि. सं.२०७२ सालमा जारी भएको संविधानलाई थापाले उत्कृष्ट भन्दै सरकारमा सहभागी भए । यसले राप्रपाभित्र उनीप्रति तिव्र अस’न्तुष्टि बढ्यो । थापाले सैद्धान्तिक रुपमा दरिलो गरी खुट्टा नटेकेको सन्देश गयो ।
कमल थापाप्रति हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाका पक्षधरले ठूलो भरोसा गरेका थिए । त्यसमाथि २०७२ सालमा घात भएको सन्देश गइसकेको थियो । उनको जीवनशैली र कार्यशैली हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाका पक्षधरको भन्दा फरक देखिनथाल्यो ।
धर्मको मु’द्दा सत्तामा पुग्ने खुड्किलो मात्र बनाएको टिप्पणीहरु हुनथाले । राप्रपा समर्थकहरुले उनमा सैद्धान्तिक वि’चलन आएको देख्न थाले । यसकारण उनी एकता महाधिवेशनमा राप्रपा कार्यकर्ताबाट नेतृत्वमा अस्वीकृत भए ।
४. परिवार र आफ्नालाई मात्र अवसर :-
राप्रपाभित्र कमल थापाले आफ्नो दललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाएर समानुपातिकमा आफन्त र आफूनिकटस्थलाई मात्र समेट्ने शैली अपनाएको आ’रोप लाग्यो । उनले भाई र परिवारका अरु सदस्यलाई महत्वपूर्ण अवसरहरु दिए । यसले कार्यकर्तामाझ अ’सन्तुष्टि बढ्यो ।
सरकारमा जाँदा जहिले पनि आफ्नो नेतृत्वमा मात्र जाने गरे । अरु नेता कार्यकर्तालाई मौका दि’एनन् । भाईलाई सभासद बनाउने देखि भतिज र छोरीलाई केन्द्रीय कमिटीमा लगे । उनी पारिवारिक घेरामा सिमित हुन थाले । आफूनिकटस्थबाहेक कार्यकर्ताहरुको दूरी बढ्न थाल्यो ।
राप्रपा कार्यकर्ताबाट कहिले अनुमोदित नभएका दिपक बोहराको बढी साथ लिए । उनले राप्रपाभित्रको चुनाव ल’डेका थिएनन् । राप्रपाभित्र कार्यकर्तामाझ बलियो पकड बनाएकाहरु पेलाईमा परे । यसले पनि राप्रपाभित्र थापाप्रति तिव्र अस’न्तुष्टि बढ्यो ।
५. नयाँ पुस्ताको छाल :-
युवाहरुले कमल थापालाई विश्वास गर्न सकेनन् । उनीहरुले राप्रपामा परिवर्तन चाहे । फलस्वरुप नयाँ पुस्ताका राजेन्द्र लिङ्देन र धबल शमशेरले छ’लाङ मा’रे । कमल थापा युवा मतले नै परा’जित भए । रिपो’र्टर्स नेपाल बा’ट ।